Wararka Maanta: Sabti, May 16, 2020-Soomaaliya oo ku gacan seyrtay codsi ka yimid Kenya oo la xiriiray arrinta kiiska badda ee yaalla maxkamadda ICJ
Mahdi Guuleed oo la hadlay laanta Afka Soomaaliga ah ee BBC-da ayaa waxa uu sheegay in marnaba Soomaaliya aysan aqbali Karin in kiiskaas dhageysigiisa dib loo dhigo, islamarkaana ay ku gacan seyreen codsiga Kenya ee ahaa in sababo la xiriira xanuunka COVID-19 dartiis dib loo madlo garmaqalka maxkamadda.
“waxaan doonayaa in aan iftiimiyo in dowladda Kenya ay rabtay mar walba in ay dib u dhigto, dacwadda amma ay isku daydo in meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ah wax lagu xalliyo, innaga mowqifkeennu wuxuu yahay in mar walba maxkamadda iyo qawaaniinta caalamiga ah ee dunida ku heshiisay si nabad ah oo amni ah loogu kala baxo” ayuu yiri ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed.
Mar wax laga weydiiyay haddii Kenya ay ka cabaneyso qarashaadka ku baxaya maxkamadda iyo qareennada difaacaya, Soomaaliya oo tag ahaan ka jeeb yar Kenya , halka lacagtaas ay ka keeneyso ? waxa uu ku jawaabay in arrintaasi ay sax tahay, hase-ahaatee la kari karayo ,balse Soomaaliya ay ka bixineyso miisaaniyaddeeda yar.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Kenya ay dhowr jeer isku dayday in kiiskaasi loo galo hab diblumaasi ah, sida in lagu xalliyo wada-hadal amma la geeyo meelo ay kamid tahay midowga Afrika, balse Soomaaliya taasi ay aqbali weysay.
Dhageysiga kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa loo balansanyahay 8-da Juun 2020.
5/16/2020 6:46 PM EST